Iindaba - Iinkonzo zokuQeda iiNkonzo zokuQeda uLwabiwo lweMetal
Izahlulo zeMetal Fabrication yesiko
Amacandelo Metal Stamping
Trailer uzinzisayo Jack
Ilayisha i-Dock Bumpers
Umgodi woMlilo / iiNdawo zoMlilo / iiNdawo zeGrill
Ithagethi yentsimbi yeGong
Ukwenziwa koMsebenzi oMnzi
Iinkonzo zokuQeda iiNkonzo zokuQeda ukuFaniswa kweMetal
I-Thyh Metal Fabrication Iinkonzo zokuGqibela: Ukuchithwa, ukupholisha nokupeyintwa
Ukuchithwa kunye nokupolisha ziinkqubo eziphambili zokugqiba kwimveliso yesinyithi, efunekayo ngaphambi kwesinyathelo sokugqibela sokupenda.
I-Deburring isusa i-burrs enokuthi yenzeke ngexesha lokwenziwa kwesinyithi.Nangona ii-burrs zihlala zincinci, zinokubangela imiba yendibano okanye zonakalise ukuthembeka kwamalungu agqityiweyo ukuba awasuswanga.Inkqubo yokuhlawula isusa ezi zinto zinokuba yingozi.
Ukukhutshwa kwemali kubandakanya iinkqubo ezahlukeneyo zemanuwali kunye nezoomatshini:
Ukusika: Iidrili, iifayile, izikrweqe, iibhrashi, iindlela ezidityanisiweyo ze-abrasive, ii-edgers zoomatshini okanye ukuchithwa komatshini.
Ukuxubha amandla: Isebenzisa iibrashi zefilament zentsimbi kwizinto ezahlukeneyo, iimilo kunye nobukhulu.Ukukhawuleza kwaye kuyabiza.
I-Bonded abrasive finishing: Indlela yesanti esebenzisa amabhanti, amaphepha, iipads, iidiski okanye amavili.Iibrasives eziqhelekileyo ziyi-aluminium oxides, i-silicon carbide, okanye i-zirconia compounds.
Ukuqhushumba kweAbrasive: Ukuqhubela phambili ngoxinzelelo lomoya, ukuqhuma kwe-abrasive kungenziwa kumanzi okanye komile.
Ukugqitywa kobuninzi kuvumela iindawo ezininzi ukuba zihlanjululwe kwaye zigqitywe ngaxeshanye.Oku kunokuba linyathelo lokugqibela kwinkqubo yokugqiba yamacandelo asebenzayo.Iindlela ziquka ukugqibezela ukungcangcazela, ukudilika komgqomo, kunye nokugqitywa kwe-centrifugal.
I-Electropolishing yindlela engasebenziyo, engaphazamisiyo, ehlala isetyenziselwa ukususa i-burrs kwiindawo ezinzima okanye ezibuthathaka.
Inkqubo efanelekileyo yokuqhawula ixhomekeke kubukhulu kunye nokumila kwe-burr, kwaye kuya kuthatha ntoni ukuyisusa ngaphandle kokonakalisa inxalenye yentsimbi eyenziweyo.Bonke abaqulunqi abanezakhono zeMetals banokumisela eyona nkqubo ilungileyo yokukhupha kunye nokugqiba ukufezekisa iindawo ezichanekileyo.
Le nkqubo yokugqiba isinyithi yenye yamanyathelo okugqibela okwenziwa, emva kokusika kwe-laser, ukwenza okanye ukugoba, ukuchithwa kunye nezinye iinkqubo zokwenza isinyithi.Ukukhazimliswa kususa naziphi na ii-miniscule burrs eziseleyo, kwaye emva koko ziyibhubhise ukuya ekugqibeleni.Injongo yokugqibela yokupholisa isinyithi yindawo egudileyo ehambelana neprojekthi yakho.
I-Metal polishing isebenzisa i-abrasive compound ebambelele kwivili okanye ibhanti enika ukukhuhlana.Ubume besinyithi ekuqaleni kwenkqubo yokupolisha yinto enquma uhlobo lwe-abrasive esiya kusetyenziselwa ukudala ukugqitywa okufunwayo.Sinazo zombini ubuchwephesha bendlu kunye nobudlelwane obuphambili bomthengisi ukuze sifezekise nakuphi na ukugqitywa kwesinyithi esinqwenelekayo, ukusuka ku-#3 ukutya okuziinkozo ukuya kwi-#8 yesipili nayo yonke into ephakathi.
I-Thyh Metals Fabrication ibonelela ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo zokuyila kunye nokugqiba, kubandakanywa ukusika i-laser, ukugoba, ukubumba, ukuchithwa, ukupolisha nokupeyinta.Ukuba yivenkile enye kuthetha ukuba unokuthembela kwiinkqubo zomgangatho ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni kweprojekthi yakho yokwenziwa kwesinyithi.
Ngaba ulungele ukufumanisa ukuba iinkqubo zethu ezichanekileyo zinokubonelela njani ngokugqiba kwiprojekthi yakho yokwenziwa kwesinyithi?Cela ikhowutiApha kwaye enye yeengcali zethu zokuthengisa kunye noqikelelo lwabasebenzi baya kukuvuyela ukuhamba nawe kwiprojekthi yakho elandelayo.
Ukukhetha ukugqitywa kwepeyinti kuyinyathelo elibalulekileyo kwinkqubo yokwenziwa kwesinyithi.Ukugqitywa kwepeyinti efanelekileyo kunokwandisa ixesha lokuphila kweengxenye zetsimbi kunye nokuphucula ukubonakala.Sinezo zombini kulwazi lwendlu kunye nobudlelwane bomthengisi obalulekileyo ukufezekisa ukupeyinta njengento elula njengeengubo ze-primer kwaye zibanzi njenge-Kynar kunye nepeyinti ye-enamel.Sifanelekile ukuba sinikeze umgangatho wepeyinti ogqwesileyo kunye nokukhusela naluphi na uhlobo lwesinyithi okanye iprojekthi.
Ukufaka ipeyinti kwiphepha lesinyithi kufana nokufaka ipeyinti kwezinye iindawo.Siqala ngentsimbi ecocekileyo yokucoca ukuphelisa nayiphi na inkunkuma okanye i-rust, emva koko sisebenzise i-rust-inhibiting primer kwisinyithi esinentsimbi.I-primer coat ilandelwa ngamanqanaba amaninzi epeyinti, kwaye igqibe ngengubo yokukhusela.Sinokupeyinta iintsimbi ezine-ferrous kunye nezingezo-ayoni.
Iinkonzo zokupeyinta kunye nedyasi ephezulu ziquka:
Amanzi asekelwe kwi-latex primers
I-CARC ethobela uMkhosi iyagqitywa
Iqela lethu loyilo kunye neenjineli ziya kusebenzisana nawe ukugqiba ukuba yeyiphi ipeyinti elungele iprojekthi yakho yokwenza isinyithi kunye nohlahlo lwabiwo-mali.Thetha nomphathi weprojekthi ukuze ufumane esona sicelo sigqibeleleyo sesinyithi seprojekthi yakho.
Ixesha lokuposa: Sep-07-2021
INDAWO YOSHISHINO YASEJINGKOU, ISITHILI sase-CHENGYANG, ISIXEKO saseQINGDAO, ETSHAYINA
Ukubuza malunga neemveliso zethu okanye unikezelo, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siya kuqhagamshelana phakathi kweeyure ezingama-24.
© Copyright 20152030 : Onke Amalungelo Agciniwe.